किन पर्छ चाउरी ? - सौन्दर्य - प्रकाशितः पुस २२, २०७३ - नारी
किन पर्छ चाउरी ?
जब उमेर बढ्दै जान्छ तब कोमल छालाको माथिल्लो तह खुम्चन थाल्छ अनि भित्री तहमा सघनता कम हुनाले छाला पातलो हुन्छ । बढ्दो उमेरमा मुहारको कोशिकाको उभार कम भएर छाला थिचिन्छ, परिणामस्वरूप छाला कमजोर र पातलो देखिन थाल्छ । मुहारमा आउने यस्तो परिवर्तनमा सूर्यको किरणको प्रमुख भूमिका हुन्छ । हाम्रो मुहार तथा हातको छाला बढी संवेदनशील हुन्छ र सूर्यको किरण सीधा त्यहाँसम्म पुग्छ, त्यसैले हाम्रो मुहार तथा हातमा उमेरको छनक चाँडै देखापर्छ । चाउरी दुई प्रकारको हुन्छ । पहिलो मुहारको माथिल्लो तहमा देखिने मसिना रेखाहरू तथा दोस्रो भित्रसम्म पुगिसकेका कठोर रेखाहरू । वैज्ञानिकहरूद्वारा खोजी गरिएका उत्पादनमा निम्न सोल्युसन पाइन्छन् जुन छालाको उमेर घटाउन सहयोगी सिद्ध हुन्छन् ।
ट्रिटिनोनिन, रेटिन ए तथा अन्य रेटिनोयड्स ।
मोस्चराइजर्स र लोसन्स ।
एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स ।
केमिकल पिलिङ ।
लेजर रिसर फेसिङ ।
प्लास्टिक सर्जरी फेस लिफ्ट ।
रेटिनौलले छालामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसले पिग्मेन्टेसनदेखि लिएर चाउरीजस्ता समस्याबाट छुटकारा दिन्छ । रेटिनौल भिटामिन ‘ए’ को संशोधित रूप हो । रेटिनौलले कोशिकाहरूलाई क्रियाशील बनाउँछ र छालाको बन्द प्वाल खोल्छ । यसले गर्दा प्राकृतिक तेल जुन छालाको प्वाल बन्द हुँदा छालाभित्र हुन्छ र मुहारमा पिग्मेन्टेसनका रूपमा उभार्छ, त्यसलाई छालाको माथिल्लो सतहमा विनाअवरोध बग्न मद्दत गर्छ । भिटामिन एले छालाको कोशिकालाई जवान बनाउनुका साथै घामले ओइलाएको कोशिकालाई रिजुमिनेट गर्छ । छालाको प्राकृतिक एक्सफोलिएसन रेट बढाएर सतहभित्र लुकेको कोलोजनलाई पनि रिपेयर गर्छ ।